ကွယ်လွန်သူမိခင်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ? နှင့်ကွယ်လွန်သူ | တိုတိုလေး
မိခင်တစ် ဦး ဆုံးရှုံးခြင်းသည်လူတစ် ဦး အားမိမိအသက်ကိုပေးသူ၊ ကြီးပွားတိုးတက်မှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာသူအားမိမိကိုယ်ကိုရှုံးနိမ့်သောကြောင့်ခံစားရနိုင်သောအပြင်းထန်ဆုံးနာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသော်လည်းဝိညာဉ်ရေးအကူအညီဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းက ပို၍ မြန်ဆန်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားမိသည့်အခါ (သို့) မလိုအပ်တော့သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တရားသည်ဤဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောကြောင့်အရေးကြီးသောဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကျကျတိကျသောစာကြောင်းများရှိသည်။
2 ၁) ကွယ်လွန်သူ၏မိခင်တိုတောင်းသောဆုတောင်းပဌနာ
3 ၂။ ကွယ်လွန်သူ၏မိခင်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း
4 ၃။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောမိခင်ထံဆုတောင်းပါ
ဤဆုတောင်းခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာဆုတောင်းတစ်ခု၏အလယ်၌တွေ့နိုင်သည်။ ငါတို့လိုအပ်နှစ်သိမ့်အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသောစွမ်းအားရရှိနိုင်ရန်မှာအခြားရှုထောင့်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအချို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိခင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းသည်ကောင်းကင်နေရာများတွင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားစေသည်။ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်မှောက်၌မှန်ကန်သောအသက်တာရရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
နောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာမိခင်ရှိခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ရန်နှင့်ထာဝရအနားယူရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာခံစားရရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု ၀ င်များအားအလင်းကိုကျော်လွန်စေသည်ကိုသိရှိစေသည် သေခြင်း.
“ မြေကြီးပေါ်မှာအမေ၊ အပျိုစင်မာရိကိုမွေးချင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်၊ ငါတို့မိသားစုရင်ခွင်ကနေမင်းခေါ်တဲ့မင်းရဲ့ကျွန် N ကိုသနားစာနာတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါ။
Guadalupe ၏စိန့်မာရိ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့အတွက်အမြဲတမ်းရှိခဲ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ ကောင်းကင်မှကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်၍ ကူညီပေးပါ။ မြေကြီးပေါ်မှာသူစွန့်ခွာခဲ့ရသူများကိုသင်၏သနားကြင်နာမှုဖြင့်ကာကွယ်ပါ။ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူထသော၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆုတောင်းခြင်းပုံစံများစွာရှိသည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာအနေဖြင့်ရှိသည် အလွတ်ကျက်ရန်လွယ်ကူသောစာကြောင်းတိုများ ပြီးတော့ငါတို့အချိန်တိုင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ
အထီးကျန်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းနေလိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူကိုသတိရစေလိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်များတွင်အချိန်များစွာမလိုအပ်သော်လည်းဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်၊ ဘုရားသခင့်ဘက်မှသာရရှိသောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို။
“ အိုအမေ၊ အဲဒါကိုပြောချင်တယ်
မင်းဟာငါ့ဘ ၀ ရဲ့လမ်းပြ၊
ဤမျှလောက်များစွာသောလှပသောအရာ, သင့်အသံ, သင်၏ရယ်မောမေ့လျော့ဖို့ဘယ်လို ...
မိခင်များသည်ချိုသာပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝသည့်သတ္တဝါများဖြစ်ပြီးသားသမီးများ၏ကောင်းကျိုးကိုအမြဲအာမခံပေးသည်။ စံပြမိခင်တစ် ဦး ၏ဥပမာမှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏မိခင်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်နေပြီးသူ၏သားကိုမည်သို့ချစ်မြတ်နိုးရမည်ကိုသိသည်။
အ မိခင်များသည်လူတိုင်း၏စပျစ်နွယ်ပင်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားသခင်နှင့်ဤအပိုင်းသည်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သာဖြည့်ဆည်းပေးသောအချည်းနှီးကိုဖြစ်စေသောအခါသူမကိုယ်တိုင်သူမသည်သူ၏ကလေးများကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်သောဘုရားသခင့်ဘေးတွင်ရှိနေသည်ဟူသောအတွေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်ပေါက်လာသည်။
နာကျင်မှုများစွာ၊ ဤမျှလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဗလာကျင်းခြင်းဖြစ်စေသည်။ \_ t
အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်, ကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လက်တော်ကိုတင်ပါမည်။ မင်းကိုပေါင်းသင်းဖို့ဒီဘ ၀ မှာခေါ်ခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့မိခင်ကို။ သူ့ကိုပရဒိသု၌ထာဝရစိုးစံစေပါ။ အမေ၊ ငါပြောတာကမင်းဟာမင်းရဲ့လမ်းပြမြေပုံပါ။
ငါတို့ကိုဤလောက၌ရှိစေခြင်းငှါ၊ ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကို ထောက်၍၊
လှပသောအရာများစွာကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ သင်၏အသံ၊ ပြုံးခြင်းစသည့်အရာအားလုံးကိုအမြဲတမ်းဂရုပြုပြီးသတိပြုပါ။
my the my And, And my And ငါဆုတောင်းသောစကားသံကိုနား ထောင်၍ ငါ့အမိ၊
သင်၏ ၀ ိညာဉ်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်လက်ခံသည်။ ထာဝရငြိမ်သက်ခြင်းပါ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။
သင်မည်မျှပင်ဆိုးရွားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်မိခင်မိခင်ကိုစကားပြောနိုင်သည့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်မိခင်တစ် ဦး တည်းအဖဘုရားသခင်နှင့်အတူတူနေခြင်းထက်ကောင်းသောနေရာမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ပါသည်။
အသံကိုမြှင့်ရန်သို့မဟုတ်ဖယောင်းတိုင်များကိုထွန်းညှိရန်မလိုအပ်ပါသို့သော်စိတ်နှလုံးမှဆုတောင်း။ ဆုတောင်းခြင်းသည်စိတ်ရိုးဖြောင့်ခြင်းရှိပါစေသော။ ထို့အပြင်သင်၌ရှိရန်မှာယုံကြည်ခြင်းသည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်နိုးကြားခြင်းဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ သူတို့သွားရမည့်နေရာကိုယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိမ့်ကျ။ မြင့်သောအသံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ထဲ၌ဖြစ်စေပြုလုပ်ထားသောဖယောင်းတိုင်များမှာကျွန်ုပ်တို့ယခုမြင်နိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသာဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဆုတောင်းချက်များကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်သည်။